दुई वटा प्लेन नै चार्टर गरेर जन्ती लाने यी हुन धनकुटाका किसानका छोरा ! खर्च कति ? – Medianp
शनिबार, ०९, चैत, २०७५
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०१, २०७५१४:३०
काठमाडौ । अहिलेको समयमा विवाहमा जन्ती जाँदा गाडी रिजर्भ गरेर जाने चलन सामान्य हो । तर, दुई वटा प्लेन नै चार्टर गरेर जन्ती जाने विवाह सुन्दा थोरै अनौठो लाग्न सक्छ । धनुकुटाका एक किसानले यसरी नै आफ्नो छोराको विवाह गरेका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिका ९ का नगेन्द्र थापा एक सामान्य किसान हुन् । उनी अहिले पनि अलैची कृषकको नामले परिचित छन् । उनले खेती किसानीबाटै सिधुवा, हिले, धरान लगायतका विभिन्न शहरहरुमा निजी घरहरु बनाएका छन् । उनले भर्खरै मात्र आफ्नो एकमात्र २९ वर्षीय छोरा दिनेश थापाको काठमाण्डौ ठमेल निवासी प्रज्ञा सुवेदीसँग हिन्दू परम्पराअनुसार भव्य विवाह गरिदिएका थिए ।
थापाका अनुसार गाँउका ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँ भ्रमण गराउने मुख्य उद्देश्यले जन्तीको रूपमा २ वटा प्लेन चार्टर गरेर लगेको बताए । उनले छोराको विवाहमा विराटनगरसम्म प्लेनमा आउँदा जाँदा र विराटनगरबाट धनकुटासम्म गाडीमा यात्रा गर्दा झण्डै ७ लाख ५० हजार खर्च भएको बताए ।
उनकाे छोरा दिनेशले बीएस्सी गरेका छन् । उनी हाल सुनसरी टेक्निकल कलेजमा फार्मेसीमा एमएस्सी गर्दै छन् । उनी यस वर्ष फार्मेसीमा पूर्वाञ्चल टपर पनि हुन् । उता थापाका बुहारी प्रज्ञा भने काठमाण्डौमा नै लक्ष्मी बैंकमा काम गर्दै आएकी छिन् ।
मुम्बईमा पैदल यात्रु हिड्ने पुल भत्किदाँ छ पुग्यो
वृद्धादेखि सुत्केरीलाई नागरिकता
राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज बदलिँदैन : मन्त्री थापा
मोरङको कानेपोखरीमा सवारी दुर्घटनामा २ को मृत्यु ७ घाइते
आगलागीमा परेर महिलाको मृत्यु
हजार, लाखमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अब हाकाहाकी करोड, अर्बमा हुन थाल्यो – गजुरेल
खाने होइन मलेखुको माछा ?
विप्लव माओवादीका नेता ओलीसहित नौ जना पक्राउ
द्वन्द्वको घाउ बल्झाउन नहुनेमा जोड